Fanambarana : Mpino Kristiana « HERIKO » - Le blog de Ny Marina
Fanambarana avy amin’ny vondrona
Mpino Kristiana « HERIKO »
HEtsika ho an’ny Rariny Ijoroako amin’ny maha Kristiana Olom-pirenena
« Jehovah no HERIKO sy ampingako ; Izy no itokian’ny foko ka voavonjy aho »(Sal28,7) Izahay Mpino Kristianina ivondronan’ny Mpitandrina sy Laïka maro avy amin’ny Fiangonana samihafa dia mijoro am-pahasahiana hanohitra ny trangan-javatra rehetra mifanohitra amin’ny sitrapon’Andriamanitra ; nefa iniana ajoro mba hiainana eto amin’ny firenentsika ankehitriny. Tsy afaka ny hangina izahay amin’ny maha-Kristianina anay manoloana ny lainga sy fitaka, hita miharihary ary manjaka hatraiza hatraiza eto amintsika ; tsy afaka ny hijery maso fotsiny izahay mahita ny fandrobana, vono olona, fampihorohoroana ataona Miaramila sasany sy sivily. Heverinay fa tsy azo atao ny hilaza ho « tsy miandany » manoloana ny zava-misy ankehitriny, satria rehefa marina dia marina ary rehefa tsy marina dia lainga ka tokony hotoherina. Ny tenin’Andriamanitra no marina ary fahamarinana.
- « Aza mamono olona » (Eksodosy 20,13). Koa helohinay amin’ny herinay rehetra ny vono moka ataon’ny miaramila sy sivily sasany, amin’ny vahoaka maneho ny heviny, indrindra ireo niseho tamin’ny 28 Martsa sy ny 20 Aprily ary ny 23.24.25 Aprily 2009, na inona na inona antony ary na iza na iza no mampanao izany.Ary manainga ny vahoaka Malagasy tsy vaky volo izahay, hanohitra izany amin’ny heriny rehetra sy amin’ny fomba rehetra tsy mifanohitra amin’ny Kolotsaina maha-Malagasy sy ny maha-Kristianina.
- « Aza mangalatra » (Eksodosy 20,15) Tsy ekena ny halatra bevava miseho eto amin’ny firenena, na amin’ny endriny fandrobana fananan’olona, toy ny natao tamin’ireo orinasa maro, ny natao tamin’ny Groupe Tiko,ny CITIC ; ny Trading Center ; Samcowa Radio ; Courts,Jumbo Score sy ny maro hafa tsy àry ho voatanisa. Izany dia nohararaotin’ny andiana miaramila ka nakany ny « anjarany » koa tany Andranomanelatra Antsirabe sy tany amin’ny tanàna hafa.Ny halatra tsy azo adinoina indrindra dia ny HALATRA FAHEFANA nataon’Andriamatoa Andry RAJOELINA, tamin’ny alalan’ny basy sy ireo miaramila nampiasaina hanao izany. Koa ambaranay, amin’ny maha kristiana anay, fa tsy fanjakana ara-dalana izao misy izao ary tsy mendrika hankatoavina ny mpitondra rehetra, mihevitra ho tompon’andraikitra, ao anatin’izany. Koa mitaky ny hamerenana amin’izay nandrombahana azy ny fahefanam-panjakana nangalarina izahay.
- « Aza mandainga ary aza mety ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao » (Eksodosy 20,16). Izahay dia manainga ny Malagasy rehetra, indrindra ny kristiana mba hijoro hilaza ny marina ary hahay hamakafaka sy handinika izay vaovao rehetra fa tsy hihinana am-bolony. Betsaka ny lainga afafy ka toa zary rivotra iainana sy hanazarana ny olona any anaty fiaraha-monina. Anisan’ny lainga marivo tototra, ohatra, ny ambaran’ireo mitonona ho Mpitondra hoe: « tsy ny miaramila no nitifitra fa izy samy izy no nifampitifitra » (tamin’ ny tifitra natao tamin’ireo olona nilahatra avy any Ambohijatovo, teny Anosy). Andriamanitra mahita, ny olona rahateo koa nomeny maso hijery ka nahita sy niaina ny habibiana nataon’ireo miaramila nitifitra ny vahoaka tsy nisy indrafo, tamin’ny bala mahafaty ary bala fampiasan’ny miaramila. Miantso ireo Mpiasa ao amin’ny RNM sy TVM izahay, amin’ny maha-Raiamandreny mpanabe anay, mba tsy hamafy lainga amin’ny vahoaka ; tsy hanafina ny vaovao marina tokony ho fantatry ny vahoaka, na hanaiky ho teriterena hanao izany. Mijoroa amin’ny maha-Kristianina anareo! Mijoroa amin’ny maha-Malagasy tia tanindrazana anareo. Ianareo efa nilaza rahateo fa hiasa amin’ny mahamatihanina anareo ; kanefa mbola lainga hatrany no ekenareo ampitaina amin’ny fampielezam-baovaom-panjakana.
- « Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily niala tamin’ny finoana.» (1Tim 6,10). Fantatra fa io « fitiavam-bola » io no anisan’ny loharano nahatonga izao korontana rehetra eto amin’ny firenana izao. Nanomboka tamin’ny fividianana ny mponina ambany toerana izany ary tafapaka hatrany amin’ny manam-boninahitra ambony teo amin’ny tafika. Aoka tsy ho ny vola no atao andriamanitra hivavahana sy hamadihana tanindrazana, ka rehefa misy manome vola dia vonoina ny feon’ny fieritreretana. Na dia hamonoana ny mpiray firenena aza dia tanterahina noho io vola io.
- Manainga ny Malagasy izahay, indrindra ny kristiana, mba tsy hankato ary tsy hanaiky ny fijoroan’ny fanjakana toy izany eto amin’ny tanintsika. Anisan’ireny ity HAT ity sy ny rafitra rehetra ajorony. Marihinay fa tsy mifanitsy ary tsy manamarina velively ny voalazan’ny Soratra Masina, ao amin’ny Rom 13,1.2, io milaza azy ho fahefam-panjakana mijoro io, satria tsy mpitondra izy ireo, fa nangalatra fahefana. Tianay ny hampahatsiahy sy hampahafantatra ny vahoaka mbola misalasala fa tsy fangalatra na faka an-keriny ny fanjakana. An’Andriamanitra izany ary ny Mpitondra apetraka eo, araka ny lalam-panorenanan’ny firenena, no misolotena Azy amin’ny fitondrana.. Koa izay mandroba fahefana dia mpandroba an’Andriamanitra. Diso isika kristiana raha milaza ny fahefana toy izany ho « avy amin’Andriamanitra » na ho « araka ny sitrapon’ Andriamanitra ». Tsia ! Miteny ratsy an’Andriamanitra izany ka atao hoe « Blasfemia » ! Andriamanitra tsy mba maniraka olona hangalatra na hanao barofo. Ny tantaram-pirenena voalaza ao amin’ny Baiboly dia mampiharihary mazava amintsika fa ny tao amin’ny firenena Avaratra izay nanjakan’ny fanompoan-tsampy ihany sy tany amin’ny firenena jentilisa no nahitana fanonganam-panjakana na fakana fahefana amin’ny herin’ny tafika. Ny mpanongana tamin’ireny rehetra ireny dia nambara ho mpiodina sy mpioko avokoa, ary mioko amin’ny « olom-boahosotr’ Andriamanitra ». Ny fanjakan’i Joda izay niankina tamin’ny Tompo kosa dia tsy nahitana velively izany fanonganam-panjakana izany.
- Lavinay, fa tena tsy izy satria mifanohitra amin’ny Soratra Masina ny fampiasana ny fanompoana maha Mpiandry na maha Mpitondra fivavahana, hanaovana zavatra mifanohitra amin’ny fahamasinana. Anisan’ireny, ohatra, ny fivavahana sy asam-pifohazana natao mialoha ny hamakiana ny tranon’ny Ministera. Mifanohitra amin’ny sitrapon’Andriamanitra izany : Mivavaka sy mangataka ny Fanahy Masina sady mamaky trano sy mandroba. Blasfemia koa no hisokajiana izany ara-tSoratra Masina ! - Ambaranay fa fihoaram-pefy tanteraka no nataon’ny Tafika, tamin’ny niandaniany ara-politika, ka nampiasana basy aman-tafondro, nakana fahefana sy ampihorohoroana ireo izay tsy mitovy hevitra amin’ny HAT. Mahameloka eo anatrehan’ny tany sy ny lanitra ny nataon’ireo vondrona miaramila sy zandary nampiasa herisetra, tsy nisy hena-maso kely akory, tamin’ny Mpitondra Fiangonana. Ambaranay etoana ny fanamelohana sy tsy fanekenay izany, ka entaninay ny mpiray tanindrazana mba hanohitra izany am-pahendrena. Tofoka sy leo amin’ny Tafika ny vahoaka maro an’isa ankehitriny, ary manomboka tsy manome hasiny ireo nambara fa «tandroka aron’ny vozona » intsony, noho ny nataon’ny sasany tamin’izy ireo. Ny tafika manontolo mihitsy novoahoso-potaka sy ataon’ny olona an-kitapo iray ankehitriny, ary ahiana hovingavingain’ny olona, satria ny « hitsikitsika natao hivavahana indray no lasa nipaoka ny zanak’akoho ».
- Mitaky ny hanajana marina ny Demokrasia izahay, koa toherinay ny fanampenam-bava ataon’ny HAT, miseho isanandro amin’ny fikatsahana hanao ampihimamba ny filazam-baovao,ahazoana manapariaka ny lainga hampiorenana ny Fitondrana tsy marina. Izany no antony anirahana miaramila hisotasota sy hanakatona ny Radio Fahazavana sy ny Radio Mada. Marihina fa tsy nahazoana fampitandremana mialoha na misy taratasy milaza alalana hanakatonana akory ireny. Tsy izay rahateo moa no natao fa tena fandrobana tsotra, ary efa ho in-telo izao no nisian’izany, manginy fotsiny ny fampihorohoana ny Mpanao Gazety sy ny Mpiasan’ny Radio. Misy ny voatery mitsoaka noho ny fifofoana ny ainy.Toherinay, torak’izany koa, ny fananganana ireo Sampan-draharaha mpisambotra (Cellule d’arrestation) sy ny CNME (Commission Nationale Mixte d’Enquête) eny Ambohibao.Tena sangy mihoatra ny loha tanteraka izany ary tsy misy Kristianina na Malagasy hanaiky ny toy izany afa-tsy izay efa nanao varo-maty ny maha-Kristianina azy, ka nivarotra izany tamin’ny « rain’ny lainga ».
- Miantso anao koa izahay, Andriamatoa Odon Marie Arsène RAZANAKOLONA, Arsevekan’ Antananarivo, hampiseho tahaka ny fihetsikao teo aloha, ka hijoroanao amin’ ny maha-tena Raiamandreny sy ny maha-Kristianina ; tsy hanavaka na hijery tany « avo avaratra », ka hanao “maty mampalahelo” sy ny “maty tsy maninona”satria tsy mitovy hevitra aminao. Tafintohina ny Kristianina maro, momba ny fihetsikao ary na dia ny FFKM aza dia eo am-baravaran’ny faharavana izao ; fahatafintohinana koa no nanjo ny kristiana maro teo am-pahitana ny raki-tsary nampiseho ny endrikao miramirana sy faly ; nefa teo ambany masonao no nisamborana sy nanaovana herisetra tamin’ny Filohan’ny FJKM. Tsy nanao na inona na inona ianao satria tsy mitovy finoana aminao sady tsy mitovy hevitra sy firehana aminao no voa, na dia mpiara-miasa sy mpiara-manompo ao amin’ny Fiangonana aza. Izany rehetra dia tantara tsy mbola nisy sy niseho teo amin’ny tantaram-piangonana sy ny firenena, raha tsy tamin’izao andro naha-Filohan’ny FFKM anao sy nandraisanao ny andraikitra maha Arsevekan’ Antananarivo anao izao.
« Feno ny kapoaka » ankehitriny, ka tsy raisinay ho raharaha politika intsony izao miseho izao fa tena famadihan-tanindrazana, fametavetana ny fahamasinan’ny Fiangonana, fanimbazimbana ny maha-Malagasy, koa manainga ny Fiangonana kristiana sy ny Mpitondra Fivavahana rehetra ao aminy, mba hijoro miaraka aminay ho vavolombelon’ny fahamarinana, tsy hanaiky lembenana na hihatra aman’aina aza. Ny tena Kristianina dia « Tsy mifaly amin’ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin’ny fahamarinana kosa » (1Kor 13,6), sady manahaka an’ Andriamanitra Rain’i Jesoa Kristy, ka « tia fahamarinana sy rariny » mba ho heniky ny famindrampon’ny Tompo ny tany sy ny firenena (Sal 33,5).
« Koa satria fantatrareo rahateo izany, ry malala, dia tandremo fandrao ho voataonan’ny fahadisoan’ny ratsy fanahy ianareo ka ho lavo hiala amin’izay iorenanareo ; fa mitomboa amin’ny fahasoavana sy ny fahalalana an’i Jesoa Kristy, Tompontsika sy Mpamonjy. » (2 Pet 3,17.18) Ho an’ Andriamanitra ny voninahitra fa ny FIADANANA ho ety an-tany !
Natao teto Antananarivo, androany faha 28 Aprily 2009
Ny « HERIKO »
« Lettre ouverte à l’attention... Manandafy Rakotonirina... »
research papers writing 22/12/2010 08:26